Dowlada Somalia oo si kulul uga hadashay lacago Shillin Soomaali ah oo ay daabacatay Puntland – Balcad.com Teyteyleey
Dowlada Somalia oo si kulul uga hadashay lacago Shillin Soomaali ah oo ay daabacatay Puntland
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadashay qalalaasaha ka taagan magaalooyin ka tirsan gobolada dhexe kaasoo salka ku haya diidmada istticmaalka Shilinka Soomaaliga oo ganacsatada qaar ay ka soo horjeesteen.
“Waxaan Maqlaynaa cabasho ka taagan lacago cusub oo la soo daabacay inay dadku ka biyo diidsan yihiin anaga lafteenu waa ka biyo diidsannahay waxa aan u sheegeynaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa soo daabacay lacagtan waa iney ka waantoobaan ficiladan oo shacabka Soomaaliyeed lagu dhibaataynayo”ayuu yiri Wasiirka Maalliyadda Soomaaliya.
Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in daabacaada lacagahan sharci darada ah ay ka mid tahay dambiyada waaweyn isagoo xusay in kuwa ku kacaya ay dhibaateynayaan malaayiin shacab Soomaaliyeed isla markaana xukunada ka dhalan karta uu ka mid yahay dil.
Waxaa uu sheegay inay wadaan qorshe dalka loogu samaynaayo lacag bedesha tii hore, waxaana kala shaqeynaya ayuu yiri hay’adda IMF, sababaha hortaagan ayuu sheegay inay ka mid ahaayeen deymaha dalka lagu lahaa oo hadda uu socdo qorsho lagu cafinayo.
The post Dowlada Somalia oo si kulul uga hadashay lacago Shillin Soomaali ah oo ay daabacatay Puntland appeared first on Ilwareed Online.